Hagaajinta Nolosha Bukaanka Medicare ee qaba Cudurka Kelyaha Hadda
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Silig News » Hagaajinta Nolosha Bukaanka Medicare ee qaba Cudurka Kelyaha Hadda
Barnaamijyadu waxay ujeedadoodu tahay inay yareeyaan horumarka cudurka kelyaha iyo kordhinta helitaanka sifaynta guriga iyo tallaalka kelyaha.
DaVita Integrated Kidney Care (DaVita IKC) — oo ay weheliyaan ku dhawaad ​​1,000 dhakhaatiir kelyaha ah, bixiyeyaasha beeralayda, bixiyeyaasha hospice-ka iyo dhakhaatiirta sare ee daryeelka - maanta waxay ku dhawaaqeen bilawga 11 barnaamijyo daryeel ku salaysan oo ku baahsan Maraykanka, kuwaas oo la filayo inay gaaraan qiyaastii 25,000 kelyaha bukaanka. Hadafka barnaamijyadu waa in la yareeyo horumarka cudurka kelyaha ee daba-dheeraada (CKD) iyo in la caawiyo bukaanno badan oo kelyuhu shaqayn waayeen inay helaan tallaalka kelyaha iyo sifaynta sifaynta guryahooda.
Barnaamijyadani waa qayb ka mid ah qaabka cusub ee dawladda ee ikhtiyaarka daryeelka kelyaha ee iskaa wax u qabso ah (KCC) — bandhig daryeel qiime ku salaysan oo bilaabmay Jan. 1, 2022, oo socon doona shan sano oo waxqabad ah. DaVita IKC iyo la-hawlgalayaasheeda ayaa ka qayb qaadanaya qandaraaska Qandaraaska Daryeelka Kelyaha ee Dhammaystiran (CKCC) ee gudaha KCC.
Si la mid ah mudaaharaadyadii daryeelka ee qiimaha ku salaysan ee dawladda ee la soo dhaafay, CKCC waxay u ogolaataa xarumaha sifaynta, dhakhaatiirta nephrologists iyo bixiyeyaasha kale ee daryeelka caafimaadka inay sameeyaan ururo daryeel oo la xisaabtan ku wajahan kelyaha si ay u maareeyaan daryeelka bukaanka Medicare. Maxaa ka dhigaya muujinta CKCC mid gaar ah waa in ay kor u qaaddo dhiirigelinta maaliyadeed ee lagu maareeyo daryeelka bukaanka Medicare ee leh marxaladaha 4 iyo 5, si loo daahiyo bilawga sifaynta iyo in la dhiirigaliyo tallaalka kelyaha.
CKD waxay saamaysaa qiyaastii 1 ka mid ah 7 (37 milyan) ee qaangaarka Maraykanka. Nasiib darro, badi dadka qaba CKD ma oga in shaqada kelyaha ay hoos u dhacayso. Waqtigan xaadirka ah, qiyaastii 50% dadka laga helay kelyo-gabka ayaa "shil" galay sifeynta-bilaabida daawaynta digniin la'aan xaalad degdeg ah. Burburku kaliya kuma keeno culeyska jireed iyo shucuureed ee bukaanka laakiin sidoo kale wuxuu ku kacaa, celcelis ahaan, $53,000 dheeraad ah bukaankiiba sanadka ugu horeeya ee daaweynta sifeynta.
Kuwa kale, barnaamijyada daryeelka qiimaha ku saleysan ee la midka ah ayaa si gaar ah si fiican uga shaqeeyay baahida sare, dadka bukaanka ah ee qiimaha sare leh, sida kuwa qaba CKD iyo heerka dhamaadka cudurka kelyaha (ESKD). Barnaamijyada noocan oo kale ah waxay awood siinayaan bukaanka, dhakhaatiirta iyo kooxaha daryeelka si ay u caawiyaan dib u dhigista horumarka CKD iyaga oo si wanaagsan u maareynaya arrimaha halista sida sonkorowga iyo dhiig-karka - labada sababood ee ugu horreeya ESKD.
Bukaannada ku jira barnaamijka CKCC, DaVita IKC iyo la-hawlgalayaasheeda waxay diiradda saarayaan sidii ay si wanaagsan isugu dubaridin lahaayeen baahiyaha daryeelka kelyahooda iyo kuwa aan kelyaha ahayn, iyo sidoo kale hagaajinta waxqabadyada si ay uga caawiyaan inay caafimaad qabaan oo ay ka baxaan isbitaalka. Dhab ahaantii, dhimista isbitaal dhigista kaliya ma siineyso bukaanadaan waqtiyo badan oo guriga ah oo ay ku sameynayaan waxa ay jecel yihiin laakiin sidoo kale waxay hoos u dhigi kartaa wadarta kharashka daryeelka-astaanta barnaamij kasta oo ku saleysan qiimaha daryeelka.
Sababtoo ah barnaamijyadani waxay gaari doonaan dad kala duwan oo bukaannada Medicare ah oo jooga juqraafiyo badan oo magaalooyinka ah, DaVita IKC waxay sidoo kale aragta fursad ay ku sii wado caawinta abuuritaanka sinnaanta caafimaad ee beeritaanka iyo daryeelka kelyaha si ballaaran.
Iyadoo la bilaabay barnaamijyadeeda CKCC, DaVita IKC waxay rajaynaysaa in ka badan labanlaab tirada bukaanada helaya daryeelka kelyaha isku dhafan ee sanadka ugu horeeya oo kaliya. Marka lagu daro barnaamijyadeeda daryeelka qiimaha ku saleysan ee tirada badan ee leh qorshooyinka caafimaadka ee guud ahaan Mareykanka, tani waxay gacan ka geysaneysaa horumarinta hadafka DaVita IKC ee gaarsiinta faa'iidooyinka daryeelka kelyaha isku dhafan ee dhammaan bukaannada.
Ka qayb qaadashada DaVita ee barnaamijyada daryeelka qiimaha ku salaysan waxay hoosta ka xariiqaysaa sida ay uga go'an tahay in la mideeyo oo si firfircoon u wanaajiyo waayo-aragnimada iyo daryeelka marxalad kasta iyo dejinta safarka daryeelka kelyaha bukaanka. Waqtigan xaadirka ah, DaVita waxay maamushaa bukaannada laga bilaabo CKD ilaa ESKD iyada oo loo marayo tallaalid, waxayna sidaas sameeyaan iyada oo aan loo eegin haddii bukaanku ku sifeeyo guriga, isbitaalka ama mid ka mid ah xarumaha bukaan-socodka.
Maxaa Kulushahay Hadda ee Xidhashada Indhaha ee 2022
Suuqa Mashiinnada Beddelaada Cadka Cadka waxa lagu qiyaasaa...
Shiinaha ayaa markii ugu horeysay soo saaray ismaamul ganacsi oo aan cidna wadin...
Hal tallaabo oo u dhow daawaynta cusub ee Cystic Fibrosis
Ginseng-ka cas wuxuu yareeyaa daalka iyo walbahaarka
Suuqa Dosimetry waxa loo dejiyay inuu diiwaangeliyo qiimaha suuqa ee U...
Dalxiisayaasha U Socda Hawaii Laakin Kharashkoodu Yaraan
Socdaalkii Gorilla ee Ruwaanda Intii lagu jiray xilligii COVID-19
Patent cusub oo US ah oo loogu talagalay daawaynta boogaha cagta ee sonkorowga...
Xog cusub oo ku saabsan Daaweynta Burooyinka Adag